Ukwakhiwa kwale nkundla "Zenit-Arena" umcimbi omude kunayo yonke e football Russian. ukwakhiwa gama kwaqala ngo-2007 futhi asiphothulwanga kuze kube manje, zokukhokha into njalo lihlehliselwe, futhi izindleko liyakhula usuku nosuku. Amaphephandaba avele njalo ekhuthaza izitatimende osonkontileka nabaphathi mayelana nokwakhiwa enkundleni.
"Zenith" ubulokhu elinde enkundleni entsha, kodwa ithonya Ekuphakanyisweni abadlali ngesivinini ongalifinyelela. Ngakho, phambili yishumi edlule, lapho kwakukhona umqondo wokwakha inkundla entsha.
Ngo-March 2005, kwabikwa ukuthi kwakubulawa ku Krestovsky siyobhidlizwa enkundleni Kirov, futhi endaweni yawo uzoqala kusukela isakhiwo ekuqaleni le nkundla. "Zenith" Yingaleso sikhathi namanje kude UEFA Cup futhi ingxenye Hulk. Ukuphathwa wamemezela ukuthi enkundleni entsha kungadla ziyikhulu namashumi ayisihlanu ama-dollar ayisigidi, futhi umthamo kuyoba izibukeli abayizinkulungwane 50.
Ngo-April kwaba umqondo enkundla esizayo. Ngesisekelo kwaba "Old Trafford". Kamuva lo mbono wagxekwa Demitom Momot owacabanga inkundla ongaphandle engafanele isimo sezulu Russian. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, ukuphathwa wamemezela ukuthi ukwakhiwa kwale nkundla "Zenit-Arena" isivele $ 250 million.
Ngo-January, abagqugquzeli ukwakhiwa wathembisa sesiyinikeza "Gazprom-Arena" (okubizwa ngokuthi inkundla lohleliwe) ngo-2009. Ngisho nangaleso sikhathi, abahlaziyi uzicabange ukuhlehliswa okuphindaphindiwe. Ngo-April, Iphini umbusi Petersburg wathembisa ukuthi ukwakhiwa kwale nkundla "Zenit-Arena" uzoqala ekupheleni kwalo nyaka.
Ehlobo lika-2006 enkundleni iphrojekthi yethulwa, olwasungulwa ngokuqinile Japanese. Isakhiwo kwaba ukuthola ophahleni ngesimo mkhathi benethuba bafudumale. Izindleko phrojekthi kwezigidi ezingu-225 zamaRandi. Ekupheleni konyaka kwathiwa kunqunywa Umakhi. Zaba Inkampani "Synthesis-MIS", okuyinto wathembisa ukwakha enkundleni "Zenit-Arena" I-ruble 6.7 bhiliyoni.
Ngo-March, uValentina Matvienko ukuthi ukwakhiwa kuzophothulwa ekupheleni kuka-2008, futhi inkathi ezayo ithimba izobamba enkundleni entsha. Ngemva kwenyanga, umbusi Petersburg ukuthi le nkundla "Zenit-Arena" kuyodingeka inkambu retractable, okuyinto kuwufanele nemadlana. Ngo-September, Iphini umbusi wanikelela isitatimende lapho waveza ukuthi ukwakhiwa kuyinto ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe. Wathembisa ukuthi enkundleni uzolunga ngo-December 2008.
Mashi Vitaly Mutko ukuthi ukwakhiwa kwenkundla yezemidlalo entsha ongathuthuka kuzo. "Gazprom" iye Kuboshwe utshalomali ngaphezulu. Esikhathini esingangenyanga Aleksandr Dyukov wakwenza kwacaca ukuthi ngo-2009 le nkundla entsha FC "Zenit 'ngeke bakubone. zokukhokha Kusolakala wathutha ngo-2010. Ngaphezu kwalokho, izindleko ukwakhiwa manje zaba ruble 13-14 bhiliyoni.
Phakathi ehlobo kwenzeka kuyanda esilandelayo intengo enkundleni "Zenit-Arena. Manje intengo ephezulu ruble 23,7 amabhiliyoni. Ubuholi uthembise ukuthi amandla kwaba abantu 62 000. Ekugcineni, kwamenyezelwa ukuthi esakhiweni uzobe elalihlala "ETS", okuyinto kwabantu ruble 13.2 billion.
Ngo-April, ulwazi livela abezindaba ukuthi ngo-2010 Metallica abadumile bazocula ngesikhathi kuvulwa inkundla. Ngo-December, isheke yayakhiwa enkundleni, futhi kwatholakala ukuthi awusebenzi nezidingo FIFA. Izimangalo ukuba babekhululeka kanjani ngokwazi indawo zezitsha futhi podtribunnogo igumbi.
Ngo-February 2010, sanquma ukwenza inkundla capacious ngaphezulu (67,000), esilimaza kakhulu ukubaluleka kwayo. Ngenxa izinguquko isabelomali ngo-Ephreli futhi andisa isikhathi ukwakhiwa. Ngenxa yalokhu, izindleko nokuvuka. Ekugcineni, uMongameli we "Zenith", kusho ukuqedwa ukuklanywa kabusha enkundleni. Umthamo omusha kuyoba abantu 68.000.
Ngo-oda Januwari Glavgosexpertiza ukuba ahlukanisa kakade wakha uphahla enkundleni, okuholela izindleko ezengeziwe futhi ukudluliswa zokukhokha. Manje, inani ukwakhiwa izindleko isikhala isivele ruble 33 bhiliyoni. Ngo-October, futhi ecekela phansi kophahla, okuyinto akafani ikhasimende. Ngo-November esimisiwe nokuthuma enkundleni ngo-2013. Izindleko lakhuphuka lafika ku-ruble angu-40 bhiliyoni.
Ngasekuqaleni kwalo nyaka, inyatheliswe enkundleni ekulungele ngokuhlala 34,4%. Ngo-February, ikomidi aphenya iqala ukuba aphenye icala lokukhwabanisa elihlobene ne ukwakhiwa enkundleni. Icala efakiwe inkontileka lokuqala kanye nenani ruble ayizigidi ezingu-500.
Ngo-March, ukuphathwa ukwakhiwa uthembisa nginikeze enkundleni ehlobo lika-2016. Ehlobo kuvela ukuthi ukwakhiwa kwale nkundla "Zenit-Arena", okuzokwenza ukusingatha okufanayo ekhaya 2018 World Cup, kuphelile-35% kuphela.
Ngo-April, wabelwa ukuba usuku oluqondile kokuqedwa - Juni 15, 2016. Vice-umbusi wawususa ukwanda izindleko futhi labala sibalo ruble 34,9 amabhiliyoni.
Ngo-March, kube walivala icala ku lokwebiwa ruble ayizigidi ezingu-145. Isizathu - the kwesikhath isikhathi. Ngo-November kwamenyezelwa - komdlalo wokuqala enkundleni entsha, "Zenith" izobamba ngo-September 2016. Ngemva kwenyanga, ngosuku washukumiseleka futhi ngo-December.
Ngo-February, inkontileka ucela ukwandisa inani ukwakhiwa ruble 35.3 billion. Ehlobo lika-elahlekile ruble ayizigidi ezingu 144,5, ayehloselwe ukusetha ibhodi vidiyo. Kunemibiko ukuthi abasebenzi abakhokhelwa. Julayi 13, ngokusho inkontileka jikelele, wathatha ngomzamo Raider wasithatha into kuyakhiwa. Akazange siqambe ukuthi ngale ndlela kwabaphathi bedolobha uzama alibale isikhathi sokuqeda.
Viktor Goncharenko: Biography, izithombe
Wasemuva Spanish Javi Martinez
Isitatimende Income - umphumela wemisebenzi kwesikhathi
"Honda Civic" 2008: Izibuyekezo nabanikazi, izici lobuchwepheshe, ngebuhle nebubi
Indlela bashise ama-movie disc usebenzisa uNero